तमु समाज बहराइनको ८ औँ महाधिवेशन तथा १९ औँ साधारणसभा – Nepalilink
नेपाली लिङ्क अक्टोबर ११, २०२१
बहराइन । तमु समाज बहराइनको ८ औँ महाधिवेशन तथा १९ औँ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार बहराइनको मानमास्थित नेपाली क्लबको सभाहलमा समाजको महाधिवेशन तथा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।
महाधिवेशनले शंकरमान तमुको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिको महासचिवमा भीम तमु निर्वाचित भएका छन् । यसैगरि राजु तमु प्रथम उपाध्यक्ष, मिना तमुस्यो द्वितीय उपाध्यक्ष र बालसिंह तमु तृतीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । किशोर घले तमु सचिवमा चुनिँदा सहसचिवमा बिफा तमुस्यो चुनिएका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकरमान तमु
कोषाध्यक्षमा नन्दा तमुस्यो र सह-कोषाध्यक्षमा कृष्ण तमु चयन भए । यसैगरि सांस्कृतिक सचिव र सहसचिवमा क्रमशः रजित तमु र मेनुका तमु निर्वाचित भएका छन् । ओम तमु व्यवस्थापन सचिव र अनिता तमु व्यवस्थापन सहसचिवमा चुनिए । यता नरेश घले तमु खेलकुद सचिव र नीरध्वज तमु सहसचिवमा निर्वाचित भए ।
महाधिवेशनबाट मेचुना तमुस्यो, कर्ण तमु, धनमाया तमुस्यो, सुनिता तमुस्यो, मैते तमु, डी. बी. तमु, सन्तोष तमु र दिल बहादुर तमु कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
समाजका सल्लाहकार चक्र गुरुङको संयोजकत्वमा अर्का सल्लाहकार मनु गुरुङ र प्रवक्ता मोहन गुरुङसहितको निर्वाचन मण्डलले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । महाधिवेशन तमु समाज बहराईनका अध्यक्ष नरेन्द्र तमुको सभापतित्व तथा नेपाली क्लब बहराइनका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बहराइनका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी विशिष्ट अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए ।
बहराइन सरकारले तोकेको कोभिड १९ को मापदण्डका कारण महाधिवेशनमा सहभागीहरुको संख्या भने न्यून रह्यो । महाधिवेशनकैबीच समाजका लागि विभिन्न तबरले योगदान पुर्‍याएकाहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । तमु समाज बहराइन तमुहरुको मौलिक संस्कार र संस्कृति संरक्षणमा निरन्तर क्रियाशिल रहदै आएको छ ।